Uphengululo lwe-EuropeanFx -Ingcaciso kunye neNgxelo engafunyanwanga | Isikhokelo esipheleleyo sikaJanuwari 2022
Uphengululo lwe-EuropeFX: Ukusasazeka, iiMali zePlatifomu, iiasethi ezinesiko, kunye noMmiselo ka-2021
Kukho izigidi zabantu abathengisa i-forex yonke imihla kwindawo yotyalo-mali kwi-Intanethi. Ukuthandwa kwale marike yezezimali engamanzi akubonakalisi zimpawu zokucotha nokuba. Ewe kunjalo, kukho amakhulu amaqonga orhwebo anika abatyali zimali ukusasazeka kunye nentaphane yeeasethi ezahlukeneyo - kodwa namhlanje sithetha nge-EuropeFX.
Njengoko unokuthelekelela kwigama, eli qonga ligxila kurhwebo lwe-forex. Nangona kunjalo, indawo inikezela ngezixhobo ezininzi zeCFD. Lo broker ubonelela 'ngokuQhubeka ngokuSebenza' (STP) yee-odolo zakhe-oko kuthetha ukuba akukho kungenelela kwedesika yokujongana.
Kolu hlaziyo, siza kuqhuba yonke into eyaziwayo malunga neYurophuFX. Oku kugubungela iimetrikhi eziphambili njengekhomishini kunye nokusasazeka, izixhobo ezinokuthengiswa, ukhuseleko kunye nendlela yokubhalisa.
I-EuropeFX-ekhokela i-Forex kunye neqonga lokuthengisa le-CFD
Ukuthengisa iintlobo ngeentlobo zezixhobo ze forex kunye neCFD
Isakhiwo esikhulu samaxabiso kubandakanya ukusasazeka okuqinileyo
Qhagamshela iakhawunti yakho ye-EuropeFX kwi-MT4
Ilawulwa ngokupheleleyo yiCySEC
Njengoko sichukumisile, iYurophuFX liqonga lokuthengisa eligxile kwi-forex nakwiiCFD. Ngapha koko, sifumanise ukuba kukho izixhobo ezingaphezu kwama-300 zokurhweba apha- ezinje ngee-CFDs kwii-stocks ze-blue-chip, iimveliso, ii-indices zehlabathi, kunye nee-FX ngababini ezifana nee-majors, abancinci kunye nababini abathandanayo. Oku kuthetha ukuba awukwazi ukuthenga kuphela kodwa kunye nokuthengisa okufutshane.
Le nkampani ibikho kuphela kwisithuba se-forex ukusukela nge-2014, kodwa oko akukhange kuyinqande ekufumaneni ukwamkelwa okuqinisekileyo kwi yorhwebo ntengiso ekuhlaleni. IYurophuFX ilawulwa ngokupheleleyo yiCySEC eCyprus (apho umrhwebi eneofisi). Ukongeza koku, iiofisi ziyafumaneka e-Australia naseJamani.
Sitshilo ukuba i-EuropeFX ibonelela ngoluhlu olubanzi lwee-asethi ezinokuthengiswa-singasathethi ke ukwenziwa kwe-STP, izixhobo zemfundo kunye nezixhobo zokurhweba. Zonke ezi zinto sele zikhankanyiwe ngaphambili siza kuthetha ngazo kula macandelo angezantsi.
Yintoni endinokuyenza ngokurhweba eYurophuFX?
Njengoko besitshilo ukuba kukho izixhobo ezingaphezu kwe-300 ezinokuthengiswa kweli qonga. Ngokubhekisele kwi-forex, i-EuropeFX ibonelela ngabantwana, iijors kunye ne-cross-pair. Umrhwebi uvumela ubungakanani beqashiso elincinci, elinokuba lilunge ngakumbi ukuba ufumanisa iinyawo zakho ekurhwebeni kwaye ufuna ukuvavanya amanzi.
Kwimeko apho ungazi, nantsi indlela ubukhulu obusebenza ngayo kwi-forex:
Ubungakanani beMicrosoft iiyunithi ezili-1,000 XNUMX zemali yesiseko
Ubungakanani obukhulu beeyunithi ezingama-10,000 zemali esisiseko
Ubungakanani obuqhelekileyo bemilinganiselo eyi-100,000 yemali esisiseko
Njengoko ubona, iindlela ezincinci zinokurhweba ngeqhezu lobungakanani beqashiso eliqhelekileyo.
Kuhlala kubhetele xa iqonga lomthengisi linikezela ngeentlobo ezininzi zeeasethi kubaxhasi, ngakumbi ukuze utshintshe ingqondo yakho malunga nento ofuna ukuyithengisa-okanye ufuna nje ukwahlula iphothifoliyo yakho-awudingi kufumana umthengisi omtsha.
I-EuropeFX ibonelela ngeeasethi ezininzi njengee-CFDs, oko kuthetha ukuba unokuthembela kumaxabiso aguqukayo esixhobo esitshintsha ngokukhawuleza kwezemali (okanye iimarike) ekuthethwa ngazo.
Sibeke ndawonye uluhlu lwee-asethi ezithengisekayo oya kuba nakho ukufikelela kuzo xa usayina kwi-EuropeFX.
I-Forex yenye yeemarike zezemali ezininzi zamanzi kwihlabathi jikelele. Ngapha koko, ngaphezulu kwe- $ 5 trillion kuthengiswa kuyo yonke imihla. Ngamaxesha angama-25 isixa esithengiswa kwii-equities zehlabathi. Nangona i-EUR / USD sesona sibini sithengiswa kakhulu kwihlabathi, kukho iimfumba ezininzi onokukhetha kuzo eYurophuFX.
Nazi ezinye zezibini zangaphambili onokulindela ukuzibona kwiqonga leYurophu FX:
Izibini ezincinci: EUR / GBP, CAD / JPY, GBP / JPY, GBP / AUD, EUR / JPY, EUR / AUD, GBP / CHF
Iibini ezibini: EUR / USD, IGBP / USDI-USD / CHF, i-USD / i-JPY, i-NZD / i-USD
Izibini ezingaqhelekanga: AUD / JPY, EUR / AUD, CAD / JPY, EUR / RUB, USD / SEC, EUR / SEK, USD / HKD, EUR / TRY
Le nkampani ngumthengisi onamalungu ama-5, nto leyo ethetha ukuba onke amaxabiso azakucatshulwa kuwe ngokubhekisele kwidijithi yesihlanu. Isizathu sokuba i-EuropeFX isinike ukucaphula ngale ndlela kukukunika ukusasazeka okungaphaya. Siza kuthetha ngakumbi ngokusasazeka kungekudala.
Inqanaba 'lokumisa' xa uthengisa i-forex kwi-EuropeFX ngama-50%. Oku kuthetha ukuba xa amanqanaba omda wakho ewela ngaphantsi kwe-50%, umthengisi uya kuqala ukuvala ngokuzenzekelayo izikhundla. Oku kuyakuba njalo de kubekho imali eyaneleyo kwiakhawunti yakho yokuvula izikhundla ezingaphezulu.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-EuropeFX ikwanikezela Isalathiso sokurhweba ngeCFDs. Ukuba uthanda ukurhweba ngokuthe chu kwaye uzinze ngomngcipheko omncinci kunezinye iindlela zokurhweba, ii-indices zinokuba sisixhobo esifanelekileyo sezemali kuwe.
Okokuqala ukukhankanywa yi-FTSE-100, ephindaphinda iinkampani ezili-100 eziqhuba kakuhle kwiLondon Stock Exchange (LSE). Ezinye ii-indices ezinikezelwayo ngeli qonga yi-Dow Jones Industrial Index (DJIA), iJapan Nikkei 225 (NI225), i-Standard & Poor's 500 (S&P 500), nangaphezulu.
Ungathengisa zonke ii-indices esele zikhankanyiwe kwi-EuropeFX usebenzisa iqonga le-MT4-esiligubungela kamva.
Xa kuziwa kwisitokhwe kunye nokwabelana ngorhwebo, awuyi kudana ngento ekhoyo kwi-EuropeFX. Sifumene ezinye zeenkampani ezinkulu ze-blue-chip kwihlabathi kweliqonga- njenge-Facebook, uGoogle, iApple kunye neNike.
Iqonga linezitokhwe ezinkulu ze-pharma ezinje ngeDynavax Technologies Inc, Merck KGaA, Giliyadi Sciences Inc, Amgen Inc, Moderna Inc, kunye nokunye.
Ukusukela ekuzonwabiseni ukusebenzisa i-cannabis ngokusemthethweni kwi-Federal Cannabis Act ye-2018 (kumazwe angaphezu kwama-30 e-US), kuye kwakho isiphumo esibonakalayo kwizitokhwe ezinxulumene nale mveliso. Ngakumbi nangakumbi abatyali mali bathatha umdla kwiimarike ze-cannabis- ngenxa yoko, inani elandayo lamaqonga orhwebo afana ne-EuropeFX abonelela ngesitokhwe se-cannabis.
I-EuropeFX ibonelela ngezona zintathu zikhokelela kwizitokhwe ze-cannabis eqongeni eziyi-Scotts Miracle-Gro, GW Pharmaceuticals, kunye ne-AbbieVie Inc.
Into enomdla kukuba, imali yokuqala yokwabiwa kwemali eyabelwe ilizwe yaziswa ngaphezulu kweminyaka elishumi edlulileyo nguSatoshi Nakamoto (umphuhlisi ongaziwayo). Kwimeko apho ungazi, i-cryptocurrency yokuqala ekubhekiswa kuyo yiBitcoin. Ukukhawulezisa ukuya kunyaka we-2020 kwaye kucingelwa ukuba kukho phantse i-5,000 yeedigital zemali ezikhoyo - ukuba azikho ngaphezulu.
Xa usebenzisa i-EuropeFX, ii-cryptocurrensets zingathengiswa kwiqonga le-MT4. Oku kuthetha ukuba ungasebenzisa izixhobo ezimnandi kunye neempawu ezikhoyo. Siza kukhanyisa ezinye izixhobo onokufikelela kuzo kungekudala.
Ke, kuya kufuneka ukuba uzibuze ukuba yeyiphi imali ye-crypto oza kukwazi ukuyithengisa? Ngexesha lokubhalwa, iYurophuFX ibonelela ngeBitcoin, Ripple, Litecoin, Dashcoin kunye Ethereum Ii-CFDs-konke ngokuchasene ne-USD.
Ukuba ukhe wanqwenela ukurhweba ngezinto ezinje ngeoyile kunye negolide, emva koko i-EuropeFX uyigubungele. Injongo yokuthenga okanye ukuthengisa izinto zorhwebo kukwenza ingeniso kumaxabiso anyukayo kunye notshintsho kunikezelo nakwimfuno zehlabathi.
Kwi-EuropeFX uyakwazi ukurhweba zombini izinto ezilukhuni kunye nezithambileyo. Apha ngezantsi sidwelise ezinye izinto ezikhoyo kuwe kwi-EuropeFX.
Ubhedu, iGolide, iCopper
Ingqolowa, umbona, umqhaphu
Irhasi yendalo, ioyile ekrwada kunye nokunye
Nangona abathengisi bakushishino lokwenza imali-uyakufuna ukunamathela kumaqonga agcina iifizi kunye neekhomishini zisezantsi ubuncinci.
Ukwenza umfanekiso ocacileyo wento onokuyilindela kweli qonga, singene kwinkcukacha ezithe kratya malunga nemirhumo onokuthi uhlawuliswe eYurophuFX.
Ukusasazeka kwi-EuropeFX kusezantsi njenge-0.1 iipipi. Njengoko besitshilo, eli qonga licaphula amaxabiso kusetyenziswa idijithi yesi-5, ivumela amaxabiso amaqhezu anjengezinto ezincinci nezincinci.
0.1 iipips ziyakhuphisana kakhulu nangona khumbula ukuba isixhobo ngasinye siya kwahluka xa kuziwa kwifayile ye- sasaza ku ni kezelwa. Ukubhekisa kwi ubuncinane ukusasazeka- i-EuropeFX ibonelela 'ngokusasazeka okuluhlaza' kuyo yonke i-forex, ii-indices, izabelo, i-cryptocurrensets, kunye nezinto zorhwebo.
IKhomishini kwi-EuropeFX ihlawuliswa ngepesenti esisigxina ye-7 %- ephindaphindwe ngobungakanani beqashiso.
Masithi amaxabiso okuvula izabelo eAmazon yi-1749.45
Ufuna ukuthengisa i-0.1 (ubungakanani beqashiso)
Uhlawula i- € 12.24 (1749.45 x 7% x 0.1 = 12.24)
I-EuropeFX ikwabonelela ngesaphulelo kwiirhafu zekhomishini kubaxhasi. Ngolwazi oluthe kratya okanye wenze isicelo esisemthethweni-nxibelelana neqela lenkxaso yabathengi kwaye baya kukuvuyela ukukujonga njengokucutha umrhumo. Nasiphi na isaphulelo sekhomishini esinikiweyo siya kunikwa kangangexesha elilinganiselweyo leentsuku ezili-14.
Ukuba uthatha isigqibo sokushiya isikhundla ngobusuku xa uthengisa nge-EuropeFX uhlawuliswa umrhumo wokutshintsha (umrhumo wobusuku bonke). Ngamafutshane, eli lizinga lenzala elihlawulwayo ngokusekwe kukwahluka phakathi kwemali ezi-2.
Ukuba ufuna ukubala eli nqanaba lokutshintshela iqonga linokubala okuluncedo:
Ukubhatalwa kwemali ye forex ngobusuku ubalo luhamba: (Ubungakanani bekhontrakthi * Ubungakanani beLot * Inqanaba lokutshintsha / i-100) / 360
Yonke enye into: (Ubungakanani bekhontrakthi * Ubungakanani beLote * Ixabiso lentengiso * Ireyithi yokutshintsha / i-100) / 360
Xa kuziwa kwimirhumo eyongezelelweyo, kufuneka sichaze ukuba kukho umrhumo wokungasebenzi we-50 EUR / USD / GBP ukuba awuthengisi iinyanga ezi-3 zekhalenda. Emva koko, umrhumo uya kuhlawuliswa ngenyanga.
Iplatifomu yokuThengisa iyahambelana nee-Ons
Ngokubhekisele kumaqonga orhwebo ahambelanayo, i-EuropeFX ngokuqinisekileyo ayinazintlobo ngeentlobo. Apha ungenza uninzi lwe-MT4, eFXGO, RoboX, okanye inqaku leMirror Trader.
Sibeke ndawonye uluhlu lwamaqonga ezorhwebo aluncedo ahambelana neakhawunti ye-EuropeFX.
I-MT4 ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezona ziqonga zorhwebo ziphumeleleyo nezaziwayo kwindawo. Zininzi izixhobo zabarhwebi zokuba basebenzise olu hlelo lokusebenza lokurhweba. Ayisiyiyo kuphela ukuba unokuthengisa iiakhawunti ezininzi kwi-MT4, kodwa ungasebenzisa i-EA ukwenza abathengisi ngokuzenzekelayo egameni lakho.
Apha ngezantsi kukho ezinye zezinto ezigqwesileyo zorhwebo ngeMT4:
Izikhombisi eziluncedo zobuchwephesha ezinje ngeMali yokuHamba kweMali (MFI), iZigZag, iSalathiso soQeqeshiso lweMakethi, iAccelerator Oscillator, iTrendline, iFibonacci, iimvulophu, Isalathi seVolumu yokuLinganisela (OBV), iStochastic- kunye nezinye ezininzi
Izixhobo ezinje: Isishwankathelo seXandra, ixabiso le-SL kunye ne-TP, iiNdawo eziQhekezayo, iShi Channel eyiyo, i-Autofibo, ubungakanani beCustom Calculator, iNewsCal, itshathi engafakwanga, iTracker yeNzuzo, iOrder Indicator, kunye nemfumba engakumbi
Izikhombisi ezithandwayo ezihamba phambili zibandakanya iiBollinger Bands, Ichimoku, iAxponential Moving Average (EMA), iMoving Average Convergence Divergence (MACD). Ezinye ziyafumaneka
Iitoni zokhetho lweodolo ukuhambelana notyalo-mali /izicwangciso zorhwebo
Ukurhweba ngokurhabaxa ngerobhothi ezenzekelayo
Le app iyafumaneka kuzo zombini ioS kunye ne-Android kwaye ikwenza ukuba urhwebe iiCFD, ii-cryptocurrensets kunye ne-forex esentendeni yesandla sakho. Uyakwazi ukufaka kwiakhawunti yakho ngokulula, wenze iiodolo kwizixhobo ezininzi zokurhweba- kwaye ujonge neendaba zakutshanje zezezimali nezoqoqosho.
I-eFXGO ibonelela abathengisi ngaphezulu kweempahla zexabiso ze-100, indawo yokuthengisa ezimeleyo, amanqaku ohlalutyo oluphambili kunye nezixhobo zokwenza iitshati ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso. Ukongeza kuloo nto, kukho ukungena ngaphakathi nohlelo kuhlalutyo lwe-EuropeFX, ukuhlala kumaxesha okwenyani, ukuguqulwa ngokulula kwezorhwebo, kunye nokwenza lula ngokulula.
I-RoboX ngumatshini wokurhweba olungiselelwe ukulungelelanisa isitayile sakho sokurhweba kunye neeasethi zakho ozithandayo. Ngokusisiseko, iRoboX yenza ialgorithm eyenziwe ngamacebo obuqu kunye nolawulo lomngcipheko.
Ukuze uqalise kufuneka ugcwalise iphepha lemibuzo emva kokulandela ikhonkco leRoboX. Isoftware iya kuthi ngokukhawuleza isebenzise iimpendulo zakho ukuskena ngaphezulu kwe-bhiliyoni yezicwangciso zorhwebo kunye nokwakha iphakheji / isicwangciso esenzelwe wena kwiimfuno zakho.
Olunye udibaniso lweqonga le-EuropeFX ngumsebenzi we 'Mirror Trader'. Njengokuthengisa okuzenzekelayo, oku kwenza ukuba abathengi bathengise ngokungakhathali.
Ukulinganisa umrhwebi onamava nembali ephumeleleyo kuthetha ukuba unokuhlala phantsi kwaye uphumle ngelixa umntu esenza imisebenzi. Yenza nje uphando, fumana umrhwebi oyithandayo, kwaye ubonise iipotifoliyo zabo. Nokuba uthengisela ntoni umntu uya kubonakala kwipotifoliyo yakho - kodwa ngokuqinisekileyo iya kuba ngokulingana notyalo-mali lwakho.
Eli nqaku alilungelanga kuphela ii-newbies ezifuna ukurhweba kodwa zingazi ukuba ziqale ngaphi- kodwa nabatyali mali abangenalo ixesha lokujonga iimeko zentengiso 24/7. Ukuba awuqinisekanga ngokuvumela umntu ukuba enze ngokuzenzekelayo imisebenzi yakho ngaphandle kokutsho njalo, ungakhathazeki-njengoko i-EuropeFX ikuvumela ukuba ubonise umrhwebi ngesandla.
Izixhobo zoRhwebo kunye noMxholo weMfundo
Ngokubhekisele kwizixhobo kunye nezixhobo zemfundo, i-EuropeFX iyamangalisa ngokwenene. Apha ngezantsi uyakufumana uluhlu lweempawu eziluncedo ezikhoyo kuwe kule ndawo yomthengisi
Njengomthengi omtsha kwi-EuropeFX, ungasayina kwaye ufake phakathi kwe- € 200 (ubuncinci) kunye ne- € 2,000. Nangona kunjalo, nceda uqaphele ukuba kufuneka ugcwalise ubhaliso lwakho lwe-KYC (wazi umthengi wakho) kwaye ungenise lonke ulwazi oluceliweyo kwiintsuku ezingama-25.
Ukuba uye wasilela ukugqiba le nkqubo kwaye uthumele ikopi yobungqina bedilesi njlnjl- lonke urhwebo luya kuvalwa. Imali yakho iya kubuyiselwa kuwe, kwaye i-akhawunti yakho iya kupheliswa. Oku kubonisa ukuba iYurophuFX ithatha uxanduva lwayo lokulawula ngokungathí sina.
Iindlela zediphozithi ezamkelweyo yi-EuropeFX zibandakanya bonke ababoneleli ngeenkonzo zokuhlawula ezinjengeVisa, i-Mastercard, ii-e-wallets kunye nokudluliswa kweengcingo zebhanki.
Iqonga alihlawulisi ntlawulo yokuthenga kwaye nje ukuba uyigqibe i-KYC yakho, ungafaka i-X50,000. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ukuba ufuna ukuqala ukurhweba kule ndawo kwangoko, ke ungcono xa usebenzisa ikhadi lekhredithi / debit okanye i-e-wallet. Isizathu kukuba ukugqithiselwa ngocingo lwebhanki kungathabatha iintsuku ukufikelela kwiakhawunti yakho.
Iindlela zokurhoxa kwi-EuropeFX ngamakhadi etyala / okuthenga, ukuhambisa ngocingo kunye ne-e-wallets. Nokuba yeyiphi na imali oyimisileyo kwiakhawunti yakho iya kusetyenziselwa ukurhoxa eqongeni.
Intlawulo yokurhoxisa nayiphi na indlela yokuhlawula okwangoku yi-25 EUR / USD / GBP. Ukuba unokugqibela ngokucela ukurhoxa kwindlela yokubhatala ngemali eyahlukileyo, i-EuropeFX iya kukuhlawulisa umrhumo wotshintshiselwano kwaye kungathatha ubuncinci usuku ukufikelela kwiakhawunti yakho.
Malunga nexesha elibekiweyo lokurhoxa, iqonga lithi linokuthatha naphina phakathi kweentsuku ezi-1 ukuya kwezi-5 zomsebenzi- kuxhomekeke kwindlela oyisebenzisayo yokuhlawula.
Ukunyuswa okunikezelwa kwi-EuropeFX kuxhomekeke kwisixhobo ekuthethwa ngaso. Sidwelise apha ngezantsi izixhasi esizifumene eqongeni ukucoca inkungu:
Ukukhutshelwa kwemali kwi-idijithali yemali ukuya kuthi ga kwi-1: 2
Izabelo ukuya kuthi ga kwi-1: 5
Iimpawu ukuya ku-1: 20
Igolide ukuya ku-1: 20
Izinto ezingekho kwiGolide ukuya kutsho kwi-1: 10
IiMali ezinkulu ukuya kuthi ga kwi-1: 30
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le mida ingentla yeyabo baseYurophu. Ukuba uhlala ngaphandle kwe-EU-unokunyuka uye kwi-1: 200. Nokuba uhlala phi, ukuba udweliswe njenge- professional Umrhwebi-uya kuba nethuba lokunyuka uye kwi-1: 200.
Iiyure ezingama-24 ngosuku, ukusuka ngoMvulo ukuya ngoMgqibelo, ungaqhagamshelana neqela lenkxaso yabathengi ngezi ndlela zilandelayo:
Incoko ephilayo kwi-Intanethi
Iqonga likwanecandelo le-FAQ ebanzi. Oku kunokukugcina ulinde impendulo eza kuthi ngqo phambi kwakho.
Masiqale ngokuthi zonke iiakhawunti kwi-EuropeFX zibandakanya indawo yedemo yasimahla. Ukongeza koku, zonke iiakhawunti zibandakanya: ukwenziwa komyalelo we-STP, amandla amakhulu e-1: 30 (1: 200 yeengcali), inqanaba lokuphuma le-50%, iisemina, ukusasazeka okungafaniyo kweepayipi eziyi-0.1, kunye neewebhu.
Ukuba awuqinisekanga ukuba loluphi uhlobo lweakhawunti oyifunayo kwimisebenzi yakho yorhwebo nceda ujonge uluhlu lweeakhawunti ezikhoyo ze-EuropeFX apha ngezantsi.
Iakhawunti yeDemo engenaNgozi
Ngokweqonga, imigaqo kwiakhawunti yedemo yahlukile kuleyo 'yeeakhawunti zokwenyani' -ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-75 kwiiswaps kunye nekhomishini.
Asinangxaki nokuba konke-iiakhawunti zedemo zibaluleke kakhulu kubarhwebi abatsha kunye namava. Olu hlobo lweakhawunti lukwenza ukuba urhwebe ngemali yedemo kwintengiso ebonisa imeko zentengiso.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iakhawunti yakho yedemo iya kuvalwa ngokuzenzekelayo emva kweentsuku ezingama-30. Ngoku, masibaleke kwiimetrikhi eziphambili zezinye iintlobo zeakhawunti ekunikezelweni ngeYurophuFX.
Iakhawunti yeBronze: Ubuncinci bediphozithi ukusuka kwi- € 1,000
Le akhawunti ibandakanya:
Ubudlelwane kubaphathi-ixesha lokulingwa
Ixesha eliphambili lokurhweba mihla le-ityala
Iimpawu zorhwebo eziphambili zorhwebo- ixesha lokulingwa
Iseshoni e-1 yabucala kwisikolo esinye sokurhweba
Umgangatho wekhomishini yokurhweba
Iakhawunti yeSilivere: Ubuncinci beDiphozithi ukusuka kwi- € 2,500
Iphepha leendaba lemihla ngemihla
Eyabucala kwisikolo esinye sokurhweba-Ukuya kuthi ga kwiiseshoni ezi-3 zizonke
Utyalomali lwe-EuropeFX (uMrhwebi weZipili kuphela)
Iakhawunti yeGolide: Ubuncinci idiphozithi € 10,000
Incwadana yeendaba yoThengiso lwemihla ngemihla
Iimpawu zoRhwebo eziPhakathi eziPhambili
Eyabucala kwiZiko elinye lokuThengisa - Ukuya kuthi ga kwiiSeshoni ezi-4 xa zizonke
Iiseshoni zokurhweba zabucala-iiseshoni ezi-2 ngenyanga nganye
Ukufikelela kwigumbi lomnyhadala-isiganeko esinye ngenyanga
Izaziso zoRhwebo ngeSMS
Utyalomali lwe-EuropeFX-uMrhwebi weZipili kunye neRoboX
IiKhomishini zoRhwebo-ukuya kuthi ga kwi-10% isaphulelo
Iakhawunti yePlatinam: Ubuncinci bediphozithi € 25,000
Eyabucala kwiZiko elinye lokuThengisa - Ukuya kuthi ga kwiiSeshoni ezi-8 xa zizonke
Iiseshoni zokurhweba zabucala-iiseshoni ezi-4 ngenyanga
Ukufikelela kwigumbi lomnyhadala-Imisitho emibini ngenyanga
IiKhomishini zoRhwebo-ukuya kuthi ga kwi-25% isaphulelo
I-akhawunti yeNkulumbuso: Ubuncinci beDepho eyi-50,000
Eyabucala kwiZiko elinye lokuThengisa - Ukuya kuthi ga kwiiSeshoni ezi-16 xa zizonke
Iiseshoni zokurhweba zabucala-iiseshoni ezisi-8 ngenyanga
IiKhomishini zoRhwebo-ukuya kuthi ga kwi-50% isaphulelo
Iinkonzo ze-VIP-Ixesha lokulingwa
IYurophuFX: Amazwe Awamkelekanga
Ngelishwa, i-EuropeFX ayinikezeli ngeenkonzo kwiindawo ezininzi, sizidwelisile ukulungiselela wena:
Ngokwewebhusayithi ye-EuropeFX, kukwakho namanye amazwe ambalwa angafanelekanga ukufumana iakhawunti, kodwa asilufumananga olo lwazi.
Uyivula njani iAkhawunti ngeYurophuFX
Okwangoku uyazi zonke iimitha eziphambili zeqonga lokuthengisa laseYurophu, kwaye banomdla wokuqalisa.
Iindaba ezimnandi kukuba kulula kakhulu ukuseta kwaye ungarhweba ngamanyathelo ama-3 alula
Inyathelo 1: Bhalisa
Ukuqala, yiya kwiwebhusayithi ye-EuropeFX kwaye ucofe u 'sayina'.
Njengoko ubona, okwangoku kufuneka ugcwalise igama lakho kunye nelokugqibela, idilesi ye-imeyile, ipassword eyahlukileyo, ilizwe kunye nenombolo yomnxeba.
Inyathelo 2: Faka iAkhawunti yakho
Khetha ngokulula enye yeendlela zokuhlawula ezikhoyo eqongeni kwaye wenze idipozithi encinci ye-200 EUR / USD / GBP.
Inyathelo 3: Qalisa ukuthengisa
Ngoku ufikelele kwinqanaba lesi-3, ungaqala ukurhweba kwi-EuropeFX kwaye usebenzise izixhobo ezininzi kunye neempawu esikuxelele ngazo ngalo lonke olu hlaziyo.
Ukuba awuziva ukulungele ukungena ngaphakathi, ungasoloko usebenzisa ithuba lokuthengisa ngeakhawunti ye-EuropeFX.
Lilonke, iYurophuFX liqonga elinokusebenziseka lula kakhulu, elinikezela abathengi ngezixhobo ezahlukeneyo zemali. Lo broker ulawulwa ngokupheleleyo kwaye ubambe ilayisensi kwiCySEC, oko kuthetha ukuba imali yakho iya kwahlulwa kwiakhawunti yebhanki yenkampani. Lo mmiselo ungqongqo ukwathetha ukuba umrhwebi uphicothwa rhoqo ukuqinisekisa ukuba ulandela imigaqo ebekiweyo.
Indawo ayikho lula ukuhamba kwabaqalayo kuphela, kodwa ikwabonelela ngoluhlu lwezixhobo zemfundo, izixhobo kunye nohlalutyo lobuchwephesha oluluncedo kubathengisi abanamava kuwo onke amanqanaba ezakhono. Sicinga ukuba indawo ilula ukuyisebenzisa kunye nenani lezixhobo kunye neempawu ezikhoyo kubarhwebi kuwo onke amanqanaba amava anomdla.
Ukudityaniswa okukhulu kwesi siqonga kukuba isebenza nge-MT4, ethi njengoko besitshilo igcwele kwizikhonkwane ngezixhobo eziluncedo, iitshathi kunye nohlalutyo. Ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa umrhwebi ubonelela ngento yorhwebo yesipili ethetha ukuba unokukopa umrhwebi ophumeleleyo njengaye.
Ngaba ndiza kuba nokufikelela kwiakhawunti yedemo kwi-EuropeFX?
Ewe. I-EuropeFX ibandakanya iakhawunti yedemo ngalo lonke uhlobo lweakhawunti.
Ngaba ndifuna ukubonelela ngesazisi sefoto ukuvula iakhawunti kwi-EuropeFX?
Ewe ungaqala ukurhweba kwangoko nje ukuba ungenise i-ID yakho kwiintsuku ezili-15.
Yeyiphi eyona dipozithi incinci kwiqonga le-EuropeFX?
I-200 yeedipozithi yeyona idipozithi encinci yokuqalisa ukurhweba eYurophu FX.
Ngaba kukhuselekile ukufaka imali kwi-EuropeFX?
Idatha kweliqonga ikhuselekile ngokusebenzisa ukubethela okungama-128-bit. Nakuphi na ukuTshintshiselana kwesi siza kwenziwa kwi-PCI yokuhlala iiseva- singasathethi ke ngeenkqubo zokuhlawula ezilawulwayo kwaye ezinelayisensi
Ngaba iYurophuFX inendawo yengxoxo ephilayo?
Ewe. Kwisiza se-EuropeFX, ungathetha neqela lenkxaso yabathengi kwingxoxo ebukhoma yeeyure ezingama-24 ngosuku, ngoMvulo-ngoMgqibelo.
Ngaba ndingarhweba nge-EuropeFX ye-forex kunye nee-CFD kwi-MT4?
Ewe. Eli qonga lokurhweba lithandwayo liyafumaneka kwiselfowuni yakho (i-android kunye ne-iPhone) kunye nedesktop kwaye iyahambelana ngokupheleleyo ne-EuropeFX.
Ngaba iqonga le-EuropeFX lilawulwa?
Ewe kunjalo. Eli qonga lokurhweba lilawulwa yiCySEC yaseCyprus.